Ukukhethwa kwemikhakha yezemisebenzi ngemuva kokuhlasela kokhuvethe - Bayede News
Ukhuvethe alubulalanga abantu kuphela kodwa ludale uguquko ezintweni eziningi emhlabeni wonke jikelele. Ukuvalwa kwamazwe kanye nezimboni eziningi akuthintanga ezomnotho kuphela kuleli, kodwa kusho lukhulu ngeminye yemisebenzi noma iziqu ezifundelwa emabangeni aphezulu. Kwenze abantu abaningi, ikakhulu ezinkundleni zokuxhumana, bazibuze kaningi ngokubaluleka kweziqu kanye nokufundelwa kwamakhono amaningi kuleli.
Bebezibuza kufanele ngoba abantu abaningi bebehleli emakhaya kanti futhi abaningi baphelelwa yimisebenzi bebe befunde bagogoda impela. Lesi sehlakalo kumele sikwenze uzibuze kaningi, impela uma ufuna ukukhetha umkhakha womsebenzi ngaphambi kokufaka isicelo sokufunda. Sikuveze kwakhanya bha ukuthi kunamakhono nemikhakha yemisebenzi okungamele uzixake ngayo.
Ngaphambi kokuba ukhethe umkhakha womsebenzi, kubalulekile ukuthi ulandele lezi zigaba ezintathu ezilandelayo:
Kubalulekile ukuthi uzazi wena kuqala ukuthi ungumuntu okanjani, ikakhulu kulo mkhakha ocabanga ukuwuthatha. Kudinga uzibuze imibuzo efaka phakathi ukuthi uthandani, yini ongayithandi, yini ofuna ukwazi kabanzi ngayo, uyakwazi yini ukusebenzisana nabantu, yini oyenza kangcono, yini ekwehlulayo, ufuna ukuhola malini, ufuna ukusebenza endaweni ekanjani, ufuna ukuzisebenza noma ukusebenza omunye umuntu, uzimisele ukufunda isikhathi esingakanani, ufuna ukuthatha umhlalaphansi nini, uyafuna yini ukuqala umndeni, ufuna ukusebenza amahora amangakhi?
Ukuphendula le mibuzo engaphezulu ngeqiniso kwenza ucabange kaningi ngaphambi kokukhetha umkhakha womsebenzi futhi kwenza ukuthi uma usukhethile ungasoli muntu ngesinqumo sakho.
Uma usuzibuzile imibuzo ngawe ngokweqiniso waphinde wakhetha umkhakha othile, udinga ukuthi uzibuze imibuzo efaka phakathi lena elandelayo: Ubani ongambuza kabanzi mayelana nalo mkhakha owukhethile? Ikhona yini inkampani engakunika ithuba lokuzibonela ngawakho amehlo ukuthi izisebenzi zisebenza kanjani noma zenzani kulo mkhakha? Bangakhi abaqashi abadinga izisebenzi kulowo mkhakha? Uyindlala yini lowo mkhakha owukhethile?
Izimpendulo zale mibuzo zikunika isiqiniseko sokuthi awuduki futhi awuthathwa wudumo lwalo mkhakha kanye nengcindezi evela kubangani bakho abakhethe lo mkhakha. Uma uyiphendule ngokweqiniso usungadlulela esigabeni sesithathu semibuzo okumele uzibuze yona.
Uma ufika kulesi sigaba sesithathu semibuzo, yilapho uzibuza khona imibuzo emayelana nezikhungo kanye nemininingwane efaka phakathi lena elandelayo: Yiziphi iziqu ezikhona kulo mkhakha engiwuthathayo, zifundelwa kuphi? Zikuziphi izimboni zezomsebenzi? Zithini izidingo zokungena ezikhungweni zemfundo ephakeme ezahlukahlukene? Yiziphi izifundo ezidingekayo okumele ube nazo uma uqeda umatikuletsheni kanye nokuthi ufuna ukufunda uze ufike kuliphi izinga lezemfundo?
Kusemqoka ukuthi wazi ukuthi uhla lokufaka izicelo zokufunda kanye nezemifundaze zimi kanjani kulowo mkhakha owukhethile. Kubalulekile futhi ukuthi wazi ukuthi kuvalwa nini ukufakwa kwalezo zicelo ungaze uphuthelwe njengentsha eningi. Into ebalulekile kunakho konke ukuthi imiphumela yakho ibe mihle kumatikuletsheni ngoba baningi abantu ozobe uqhudelana nabo ekufakweni kwezicelo kulowo mkhakha.
Engivala ngalo ukuthi ungazenyezi futhi ungazithathi kancane ngoba ungaphumelela. Noma ngabe awuphumelelanga, akusho ukuthi sekuphelile ngempilo yakho. Namuhla ngiyingxenye yaboHlanga abenza iziqu zobudokotela emveni kokuphinda ibanga leshumi, ibanga leshumi nanye kanye nomatikuletsheni kabili.
nguSanele Gamede Sep 11, 2020